लजिक प्रो एक्स को लागी टच बार समर्थन बर्षको शुरुमा उपलब्ध हुनेछ म म्याकबाट हुँ
लजिक प्रो एक्स को लागी टच बार समर्थन यस सालको सुरूमा उपलब्ध हुनेछ
हामीलाई थाहा छ टच बारले दिने सबै सुविधाहरूको फाइदा लिनको लागि कुन अनुप्रयोगहरूलाई अनुकूलित गरिनेछ। FCP, टर्मिनल, ग्यारेजब्यान्ड, नक्शा, iTunes, क्यालेन्डर, Djay प्रो वा फोटोशप, साथ साथै iWork सुटमा अनुप्रयोगहरू
तर यो कुरा थाहा पाए पछि कि लॉजिक प्रो एक्स टच बारमा अनुकूल हुनेछ, धेरै संगीत संगीतकारहरू भाग्यमा छन्। समाचार हामीलाई कम्पनीको नजिकको स्रोतबाट आउँदछ: एप्पल यसको सबै सुविधाहरूको पूर्ण फाइदा लिने इरादाको साथ तर्क प्रो एक्स अनुकूलित गर्न काम गरिरहेको छ।
यो आशा गरिन्छ कि कार्यान्वयनको आधार, जुन एप्लिकेसनको सम्बन्धमा अन्तिम कुञ्जीमा प्रस्तुत गरिएको थियो गेराजब्यान्ड. हामीसँग कार्यहरूका लागि सर्टकटहरू हुन्छन् y केहि प्रभावहरूको प्रत्यक्ष अनुप्रयोग वा ट्र्याकको शीर्षमा प्लग-इनहरू हाल सम्पादन भइरहेको छ। एप्पलको आफ्नै शब्दहरुमा, अन्तिम मुख्य भाषणमा उनले क्षमताको बारेमा कुरा गर्छन "उपकरण र प्रभावहरूको ध्वनि छिटो समायोजन गर्न वा ट्र्याकको भोल्युम समायोजित गर्न टच बार छुनुहोस्।".
अझै, हामीलाई लाग्छ कि हामीले केवल टच बार प्रदर्शनको हिसाबले हिमशिलाको टुप्पो देख्यौं, जस्तो कि बिभिन्न अनुकूलनहरू यसले हामीलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनेछ, सायद सबैभन्दा प्रासंगिक। यसले हामीलाई कुन तत्वहरूलाई अधिक बारम्बार प्रयोग गरिन्छ भन्ने छनौट गर्न अनुमति दिनेछ, जुन बाटोमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रगति हुने छ उत्पादकता.
अर्कोतर्फ, र के तत्वहरू उपलब्ध हुनेछन् भन्ने कुराको गहिराईमा जान्ने उद्देश्यले, हामी आवेदनको प्रस्तुतीकरण समीक्षा गर्न सक्छौं डीजे अन्तिम कुञ्जी मा र यसको अन्तरक्रिया थाहा छ टच बार। तपाईं तलको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।
पछिल्लो गर्मीमा अनुप्रयोगले प्रमुख अपडेट प्राप्त गर्‍यो, तर तपाईंलाई भन्नुहोस् एप्पलले अनुप्रयोगलाई ताजा राख्छ प्रति वर्ष औसत २- new नयाँ सुविधाहरूको साथ। अनुप्रयोग म्याक अनुप्रयोग स्टोरमा। 199,99 को मूल्य मा किन्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » लजिक प्रो एक्स को लागी टच बार समर्थन यस सालको सुरूमा उपलब्ध हुनेछ
टच बारको साथ म्याजिक किबोर्डको पहिलो अवधारणाहरू